Inona no Tokony Hataon’ireo “Mahalala An’Andriamanitra”? | Fianarana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ouzbek Pangasinan Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Uruund Venda Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
‘Efa mahalala an’Andriamanitra ianareo.’—GAL. 4:9.
Nahoana no tsara ny mijery tsindraindray an’ireo dingana nataontsika talohan’ny batisa?
Nahoana no mbola mila mandroso ara-panahy foana na dia ny Kristianina efa matotra aza?
Nahoana isika no mila mandinika ny finoantsika sy misaintsaina hoe nanokan-tena ho an’i Jehovah isika?
1. Nahoana ny mpanamory no manaraka lisitra iray, isaky ny hiainga ny fiaramanidina?
MISY zavatra 30 mahery tsy maintsy hamarinina amin’ilay fiaramanidina tsara indrindra eto an-tany, alohan’ny hiaingany. Manana lisitra momba izany ny mpanamory azy io, ary tsy maintsy manaraka tsara an’ilay izy, raha tsy izany dia mety hisy loza hitranga. Ampirisihina hanaraka an’io lisitra io, na dia ireo mpanamory nandritra ny taona maro aza. Mety hatokitoky foana mantsy izy ireo, ka tsy hijery tsara ny zava-drehetra.
2. Inona no tokony hojerentsika matetitetika?
2 Afaka mampiasa lisitra koa ianao, mba hahazoanao antoka hoe hatanjaka ve ny finoanao rehefa misy zava-tsarotra. Hanampy anao io lisitra io mba hijery matetitetika hoe manao ahoana ny finoanao, na vao haingana ianao no natao batisa na efa ela. Mety tsy hifandray tsara amin’i Jehovah intsony mantsy ianao, raha tsy manao izany. Hoy ny Baiboly: “Izay mihevi-tena ho efa mijoro dia aoka izy hitandrina sao ho lavo.”—1 Kor. 10:12.
3. Nila nanao inona ireo Kristianina tany Galatia?
3 Nila nankasitraka ny fahafahana nananany ny Kristianina tao Galatia, ary nila nandinika ny finoany mba hijerena raha matanjaka tsara izy io. Noho ny soron’i Jesosy, dia afaka nahalala an’i Jehovah izy ireo ary ho lasa zanak’Andriamanitra. (Gal. 4:9) Raha tian’izy ireo ny hihazona izany tombontsoa lehibe izany, dia tsy maintsy nolavin’izy ireo ny fampianaran’ireo Kristianina nilaza fa tsy maintsy arahina ny Lalàn’i Mosesy. Na ireo hafa firenena tsy voafora aza mantsy neken’Andriamanitra ho zanany, na dia tsy nanaraka ny Lalàna mihitsy aza. Nila nandroso ara-panahy izy ireo na Jiosy na hafa firenena, ary tsy maintsy niaiky hoe tsy ny Lalàn’i Mosesy no mahatonga azy ireo ho marina.
IREO DINGANA NAHATONGA ANTSIKA ‘HAHALALA AN’ANDRIAMANITRA’
4, 5. Torohevitra manao ahoana no nomen’i Paoly ho an’ny Galatianina, ary nahoana izany torohevitra izany no ilaintsika koa?
4 Noraketina ao amin’ny Baiboly ny torohevitry ny apostoly Paoly ho an’ny Galatianina, mba hampahatsiahivana hoe tsy tokony hiala amin’ny fahamarinana ny tena Kristianina, ary tsy tokony hiverina any aoriana. Natao hanampiana ny Galatianina io torohevitra io, nefa koa natao hanampiana antsika mpanompon’i Jehovah rehetra mba hahatonga antsika tsy hivadika.
5 Mila mitadidy isika rehetra hoe ahoana no nahatonga antsika ho mpanompon’i Jehovah. Saintsaino hoe: Inona daholo ireo dingana nataonao mba hahatonga anao hahafeno fepetra hatao batisa? Ahoana no nahatonga anao hahalala an’Andriamanitra sy ho fantany?
6. Inona ilay lisitra hodinihintsika ato amin’ity lahatsoratra ity?
6 Nisy dingana sivy nataontsika. Ireo dingana ireo no ao amin’ilay lisitra mila jerentsika. (Jereo ilay efajoro hoe “Dingana Nataontsika Talohan’ny Batisa Izay Manampy Antsika Handroso.”) Mila mitadidy azy ireo foana isika, mba hahatonga antsika tsy hiverina any amin’ireo zavatra eto amin’ity tontolo ity. Mijery an’ilay lisitra momba ny fiaramanidina ny mpanamory mailo alohan’ny hiaingany, ka misoroka loza. Toy izany koa fa mila mijery matetitetika an’ilay lisitra isika, mba hahatonga antsika tsy hivadika ka hanompo an’i Jehovah foana.
MIEZAHA HANDROSO ARA-PANAHY FOANA
7. Inona no modely tokony harahintsika, ary nahoana?
7 Mandinika an’ilay lisitra tokony hohamarininy foana ny mpanamory, isaky ny hiainga ny fiaramanidina. Mila mandini-tena foana koa isika, mba hahitana hoe manao ahoana ny fandrosoantsika hatramin’ny nanaovana batisa antsika. Hoy i Paoly tamin’i Timoty: “Hazòny hatrany ny modelin’ny teny mahasoa izay efa renao tamiko, ary ataovy amim-pinoana sy fitiavana ao amin’i Kristy Jesosy izany.” (2 Tim. 1:13) Hita ao amin’ny Baiboly ny “teny mahasoa.” (1 Tim. 6:3) Manampy antsika izy io hahatakatra izay takin’Andriamanitra, ary hampihatra izany amin’ny fiainantsika. Hodinihintsika izao ireo dingana sivy nataontsika hatreo amin’ny batisa, mba hahitantsika hoe mbola manaraka tsara an’io “modelin’ny teny mahasoa” io ve isika.
8, 9. a) Nahoana isika no tokony hampitombo foana ny fahalalantsika sy ny finoantsika? b) Nahoana no azo oharina amin’ny fitomboan’ny hazo ny fitomboana ara-panahy?
8 Ny fahalalana no voalohany eo amin’ilay lisitra. Ary rehefa nahazo fahalalana isika, dia nanjary nanana finoana. Tokony hampitomboina foana anefa na ny fahalalana, na ny finoana. (2 Tes. 1:3) Tena ilaina izany satria mbola mila mitombo ara-panahy isika aorian’ny batisa, fa tsy tokony hianina amin’izay fandrosoana efa vitantsika.
Mitombo foana ny hazo. Tokony handroso ara-panahy foana koa ny Kristianina
9 Azo oharina amin’ny fitomboan’ny hazo izany. Mety hitombo be ny hazo rehefa lalina be ny fakany ary misandrahaka be. Toy izany ny sederan’i Libanona, izay tena tsara tarehy. Mety hitovy amin’ny trano misy rihana 11 ny haavony. Matanjaka be koa ny fakany sady lalina be, ary mety hahatratra 12 metatra ny manodidina an’ilay hazo. (Tonon. 5:15) Mitombo haingana be io hazo io amin’ny voalohany. Mbola mitombo ihany anefa izy io aorian’izay, na dia tsy hita miharihary aza. Mihalehibe foana ny vatany, ary misandrahaka sy mihalalina foana koa ny fakany, ka lasa matanjaka kokoa ilay hazo. Toy izany koa ny fitomboantsika ara-panahy. Mety handroso haingana be isika amin’ny voalohany rehefa manomboka mianatra Baiboly, ary avy eo atao batisa. Faly erỳ ny olona eo anivon’ny fiangonana mahita ny fandrosoantsika! Mety hahafeno fepetra ho mpisava lalana na hahazo tombontsoa hafa koa aza isika. Mety tsy ho hita be intsony anefa ny fandrosoantsika aorian’izay. Na izany aza, dia mbola mila mampitombo finoana sy fahalalana isika, “mandra-pahatongantsika ho olon-dehibe” eo amin’ny lafiny ara-panahy. (Efes. 4:13) Toy ny hoe tsimoka kely àry isika tamin’ny voalohany, nefa lasa hazo lehibe sy matanjaka tsara avy eo.
10. Nahoana no mbola mila mitombo ara-panahy foana na dia ny Kristianina efa matotra aza?
10 Mbola tsy tokony hijanona eo anefa ny fandrosoantsika. Toy ny faka mahatonga antsika tsy hihozongozona sy hatanjaka ny fahalalantsika sy ny finoantsika. Mila mampitombo azy ireo isika, mba hahatonga antsika ho mafy orina kokoa hatrany. (Ohab. 12:3) Maro ny rahalahy sy anabavy nanao toy izany. Nilaza ny rahalahy iray, anti-panahy nandritra ny 30 taona mahery, hoe mbola mitombo ara-panahy foana izy hatramin’izao. Hoy izy: “Mitombo foana ny fitiavako ny Baiboly. Mahita fomba vaovao foana aho hampiharana ny toro lalana sy ny lalàna ao anatiny. Mbola mitombo foana koa ny fitiavako ny fanompoana.”
HATSARAO FOANA NY FIFANDRAISANAO AMIN’ANDRIAMANITRA
11. Inona no tokony hataontsika mba hahatonga antsika hifandray kokoa amin’i Jehovah?
11 Ilaintsika koa ny miezaka ho akaiky kokoa an’i Jehovah, raha tiantsika ny handroso ara-panahy. Mahatsapa ho voaro sy tiana ny ankizikely rehefa fihinin’ny rainy be fitiavana. Toy izany koa no tsapantsika rehefa miaraka amin’ireo namantsika akaiky sy atokisantsika. Tian’i Jehovah hahatsiaro toy izany koa isika satria izy no Raintsika sy Namantsika. Tsy tongatonga ho azy anefa ny hoe mifandray akaiky amin’i Jehovah sy tia azy. Mitaky fotoana sy ezaka izany. Aoka àry ianao ho tapa-kevitra hoe hanokana fotoana hamakiana ny Teniny isan’andro. Vakio daholo koa ireo boky sy gazetintsika vao nivoaka. Hanampy anao izany mba hahalala bebe kokoa ny toetran’i Jehovah sy hifandray kokoa aminy.
12. Inona no tokony hataontsika raha tiantsika ny hifandray foana amin’i Jehovah?
12 Lasa mifandray akaiky amin’i Jehovah koa isika, rehefa mivavaka amin’ny fo sy mifanerasera amin’ny namana tsara. (Vakio ny Malakia 3:16.) ‘Mihaino ny fitalahoantsika’ izy, ary manongilan-tsofina toy ny ray be fitiavana, rehefa mitalaho fanampiana aminy isika. (1 Pet. 3:12) Mila ‘maharitra amin’ny vavaka’ àry isika. (Rom. 12:12) Tsy afaka mifandray akaiky amin’i Jehovah mihitsy isika, raha tsy ampiany. Tena mafy ny faneren’ity tontolo ity, ka tsy ho vitantsika samirery ny handresy azy io. Raha tsy maharitra amin’ny vavaka isika, dia tsy hahazo hery avy amin’i Jehovah. Saintsaino àry hoe: Efa afa-po amin’ny vavaka ataonao ve ianao, sa mbola misy zavatra azonao hatsaraina?—Jer. 16:19.
13. Nahoana ny fivoriana no manampy antsika handroso ara-panahy?
13 Faly amin’ireo olona “mitady fialofana eo aminy” i Jehovah. (Nah. 1:7) Tokony hifanerasera tsy tapaka amin’ireo olona mahalala an’i Jehovah àry isika, na dia efa mahalala an’Andriamanitra aza. Betsaka ny zavatra mahakivy ankehitriny, ka hendry isika raha mifanerasera amin’ireo rahalahy sy anabavy, izay tena mampahery tokoa. Tena mahasoa antsika izany, satria mandrisika antsika “ho amin’ny fitiavana sy ny asa tsara” izy ireo. (Heb. 10:24, 25) Nilaza i Paoly tao amin’ilay taratasiny ho an’ny Hebreo hoe tokony hifankatia ny Kristianina. Mila olona maromaro mifaneho fitiavana anefa, vao hisy ny fifankatiavana. Miezaha àry hivory tsy tapaka sy handray anjara amin’ny fivoriana.
14. Nahoana isika no tokony ho vonona hibebaka sy hiova foana?
14 Tsy maintsy nibebaka sy niala tamin’ny fahotantsika isika, vao lasa Kristianina. Mbola tokony ho vonona hibebaka sy hiova foana anefa isika, na dia efa lasa Kristianina aza. Tsy lavorary mantsy isika, ka efa ao anatintsika ao ny ota, mamitsaka toy ny bibilava vonona hanaikitra antsika. (Rom. 3:9, 10; 6:12-14) Tokony ho mailo foana àry isika, fa tsy hoe odiantsika tsy hita ny fahalementsika. Soa ihany fa manam-paharetana amintsika i Jehovah, rehefa miady amin’ny fahalementsika isika sady miezaka hiova. (Fil. 2:12; 2 Pet. 3:9) Hahavita an’io ady io isika, raha mampiasa ny fotoanantsika sy ny herintsika mba hanompoana an’i Jehovah, fa tsy mba hanatanterahana izay tiantsika fotsiny. Hita tamin’ny zavatra niainan’ny anabavy iray fa tokony ho vonona hiova foana isika. Hoy izy: “Notezaina tao amin’ny fahamarinana aho, nefa tena hafa be ny fiheverako an’i Jehovah. Nampahatahotra be i Jehovah tamiko, ary nihevitra aho fa tsy hahavita hampifaly azy mihitsy.” Nisy zavatra tsy nety maromaro nataon’io anabavy io tatỳ aoriana, ka nanjary niady mafy izy teo amin’ny ara-panahy. Hoy izy: “Tsy hoe tsy tia an’i Jehovah akory aho, fa tsy tena nahalala azy tsara. Nivavaka mafy sy imbetsaka àry aho, ary nanomboka nanova ny fiainako. Tsapako hoe nitantana ahy toy ny ankizikely i Jehovah, ka nanampy ahy tamin-katsaram-panahy mba hiatrika an’izay olana nitranga, ary nanoro ahy izay tokony hatao.”
15. Inona no hitan’i Jehovah sy Jesosy ka ankasitrahany?
15 Rehefa nafahana tany am-ponja tamin’ny fomba mahagaga i Petera sy ny apostoly hafa, dia nisy anjely nilaza tamin’izy ireo hoe: “Aza mitsahatra mitory” ny vaovao tsara. (Asa. 5:19-21) Tokony hodinihintsika àry ny fanompoana ataontsika mandritra ny herinandro. Hitan’i Jehovah sy Jesosy hoe manao ahoana ny finoantsika sy ny fanompoana ataontsika, ka mankasitraka izany izy ireo. (Apok. 2:19) “Ny fanompoana eny amin’ny saha no mampiavaka antsika”, hoy ilay anti-panahy voaresaka tetsy aloha.
16. Nahoana isika no mila misaintsaina matetika hoe nanokan-tena ho an’i Jehovah isika?
16 Saintsaino matetika hoe nanokan-tena ho an’i Jehovah ianao. Ny fifandraisantsika amin’i Jehovah no zava-tsarobidy indrindra ananantsika. Sady fantatr’i Jehovah koa izay rehetra an’azy! (Vakio ny Isaia 44:5.) Diniho amim-bavaka hoe manao ahoana ny fifandraisanao aminy. Tadidio koa ny datin’ny batisanao fa tena zava-dehibe. Hanampy anao izany hahatsiaro an’ilay fanapahan-kevitra lehibe indrindra noraisinao, izay nasehonao tamin’ny alalan’ny batisa.
MILA MIARITRA ISIKA MBA HIFANDRAY AKAIKY FOANA AMIN’I JEHOVAH
17. Nahoana no tena ilaina ny miaritra, raha tiantsika ny hifandray akaiky amin’i Jehovah?
17 Nilaza tamin’ny Galatianina i Paoly hoe tena ilaina ny miaritra. (Gal. 6:9) Tena mila miaritra koa isika Kristianina ankehitriny, satria hiatrika fitsapana. Matokia fa hanampy anao i Jehovah rehefa mitranga izany. Mivavaha foana àry mba hahazoana ny fanahy masina. Hahatsiaro ho maivamaivana ianao amin’izay, satria hosoloan’i Jehovah fifaliana ny alahelo, ary hosoloany fiadanan-tsaina ny tebiteby. (Mat. 7:7-11) Eritrereto izao: Raha ny vorona aza ahin’i Jehovah, mainka moa fa ianao izay tia azy sy nanokan-tena ho azy? (Mat. 10:29-31) Mahazo fitahiana maro tokoa isika noho isika fantatr’i Jehovah! Aza miverin-dalana mihitsy àry na milavo lefona, na inona na inona olana atrehinao.
18. Inona no tokony hataonao, na dia “efa mahalala an’Andriamanitra” aza ianao?
18 Inona àry no tokony hataonao, raha vao haingana ianao no nahalala an’Andriamanitra sy natao batisa? Miezaha foana hahalala bebe kokoa an’i Jehovah sy handroso ara-panahy. Ary ahoana indray raha efa ela ianao no natao batisa? Mila mampitombo foana ny fahalalanao an’i Jehovah koa ianao. Enga anie isika tsy hieritreritra hoe efa mety be ny fifandraisantsika amin’i Jehovah ka tsy mila hatsaraina intsony. Diniho tsindraindray kosa ireo dingana sivy noresahintsika teo, mba hahitanao raha mihatsara ny fifandraisanao amin’i Jehovah, ilay Raintsika sy Namantsika ary Andriamanitsika.—Vakio ny 2 Korintianina 13:5, 6.
DINGANA NATAONTSIKA TALOHAN’NY BATISA IZAY MANAMPY ANTSIKA HANDROSO
Nandray fahalalana momba an’i Jehovah sy Jesosy Kristy Zanany.—Jaona 17:3
Lasa nanana finoana rehefa nitombo fahalalana.—Jaona 3:16
Nivavaka tsy tapaka tamin’i Jehovah.—Asa. 2:21
Nanomboka nifanerasera tamin’ny fiangonana.—Heb. 10:24, 25
Nibebaka noho ny fahotana natao.—Asa. 17:30
Niala tamin’ny fanao ratsy. —Asa. 3:19
Nanomboka niresaka ny fahamarinana tamin’ny hafa.—2 Kor. 4:13
Nanokan-tena ho an’i Jehovah mba hanarahana ny dian’i Jesosy.—1 Pet. 4:2
Natao batisa tao anaty rano, mba hampisehoana hoe nanokan-tena ho an’i Jehovah.—1 Pet. 3:21